Whistle Blowing - FRONTIIR
Frontiir complies with all applicable Anti-Money Laundering laws and regulations and promotes international best practices intended to prevent money laundering, terrorist financing, and other related crimes in all business dealings, upholding high standards of business integrity and honesty. Frontiir also takesa“zero tolerance” approach to corruption in all business dealings to uphold high standards of business integrity and honesty and comply with all applicable laws and promote international best practices intended to prevent bribery and corruption.
If any misconducts and suspicious activities are found, please report Here (or) please contact to 09-969 947 724
ဤအခန်းကဏ္ဍသည် Frontiir ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတည်တံ့ခိုင်မြဲမှု မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခြင်းအားသိရှိရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ Frontiir ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ အငှားဝန်ထမ်းများ နှင့် သက်ဆိုင်သူများသည် မရိုးသားမှုများ၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုများ၊ သံသယရှိဖွယ်အပြုအမူများအားတွေ့ရှိပါက Frontiir သို့ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အောက်ပါ Link ထဲသို့ဝင်ရောက်၍ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
ဤနေရာ ကို နှိပ်ပြီး တိုင်ကြားပါ။
တိုင်ကြားရန် ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉- ၉၆၉ ၉၄၇ ၇၂၄